Goormee ayey furmayaan Safarada diyaaradaha tagaya Africa
HomeWararka CaalamkaGoormee ayey furmayaan Safarada diyaaradaha tagaya Africa
7 months ago Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Finland, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
mudo dhoor bilood oo loo xayirnaa Xaalada Coronavirus ee Caalamka ayaa qaar kamid ah Diyaaradaha Caalamka waxay bilaabayaan Safarada qaarkood kuwaasi oo Xanibaad saaran labadii bilood ee ugu danbeesay Waxaana diyaaradaha bilaabaya Safarada ku jira Itoobiya airline iyo Turkisha Airline.
Labada diyaaradood ayaa sugaya furitaanka garoonka diyaaradaha Muqdisho ee aadan Cade oo hada Xiran kaasi oo la filayo in dowlada ku dhawaaqdo furitaankiisa kowda bisha iyo wixii ka danbeeya.
Turkish Airline ayaa duulimeedkeeda bilowday 15 bishan June iyadoo Safaro ku tagta wadamada Furan sida Sweden oo duulimaad joogta ku timaado.
Dalka Kenya ayaa isna la filayaa in wixii ka danbeeyo lixda Bisha July la furo sida Dowlada ay horay u shaacisay waana mid kamid ah wadamada ugu badan ee Somalida indhaha ku hayaan si ay safar ugu tagaan.
Diyaarada Itoobiya Airline ayaa iyana u furan Safarkeeda Sweden iyo Adi Ababa lakin tagitaanka itoobiya kadib waxaa adag in aad safar ku tagto Muqdisho madama uu Garoonka xiran yahay warar ay heshay Somaliska.com ayaa sheegaya in ay jiraan diyaarad ka tagto Itoobiya oo gaarta Muqdisho taasi oo dadka qaarkood isku aadiyaan si ay muqdisho u tagi lahaayeen Halkii uu Qarash kaga bixi lahaa joogitaanka Itoobiya.
Ugu danbeyn ilaa 15 bisha Cusub ee July ayaa la filayaa in safarada ay toos u furmaan dadka qaarkood ayaana bilaabay in ay Tikidhada sii jartaan.
Lasoco waxaa ku soo kordha